🎺 သီချင်း | Hultsfred သို့သွားပါ။
ဆွီဒင်၏ဒဏ္legာရီအများဆုံးဂီတပွဲတော်ကိုဤနေရာတွင်မွေးဖွားခဲ့သည် သို့သော်ဂီတမြူနီစီပယ် Hultsfred ထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ဂီတပွဲများနှင့်ပွဲတော်များအပြင်ပြပွဲများ၊ ဆွီဒင်ရော့ခ်မော်ကွန်းတိုက်နှင့်တေးဂီတကစားကွင်းများလည်းရှိသည်။ သင် Hultsfred ပွဲတော်ကိုပြန်လည်သက်ဝင်ချင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ interactive လမ်းလျှောက် Hultsfred - သင်လမ်းလျှောက်သင်ဟာဝိုင်အီစင်စင်မြင့်တွင်မြေပြင်ကိုခံစားရနိုင်သလောက်နီးပါးရှိသည်။ ဂီတလောကမှကြိုဆိုပါတယ်။
Hultsfred - အဆိုပါလမ်းလျှောက်
ဆွီဒင်နိုင်ငံ၏ ဂန္တဝင်အရှိဆုံး ဂီတပွဲတော်၏ ဇာတ်လမ်း။ The Swedish Rock Archive ဂီတမှတ်တမ်းမှ ဇာတ်လမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့် ရုပ်ရှင်အပိုင်းများကို ယခုအခါ ရေကန်တလျှောက်ရှိ ဂန္တဝင်ပွဲတော်မြေပေါ်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းလျှောက်လမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Hultsfred ရှိပန်းခြံသည်ဂီတ၏စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။ Lindblomskolan မှကျောင်းသားများသည်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုသူတို့လိုချင်သည့်အရာအတွက်အကြံပြုချက်များအဖြစ်ရေးဆွဲထားသည်။ ပန်းခြံနှင့်ကပ်လျက် Boules Court နှင့်ကောင်းမွန်သောအစိမ်းရောင်areasရိယာများရှိသည်။
Rockparty နှင့် Hultsfred Festival တို့၏ အသင်းအဖွဲ့အကြောင်းကို ပြောပြသော "Home Sweet Hultsfred" ပြပွဲ။ ဇာတ်လမ်းက နံရံမှာရှိတယ်။ Rockparty နှင့် Hultsfred Festival အကြောင်းပြပွဲကို Klubben အခန်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။
"လေထဲမှာဂီတရှိတယ်" (Hultsfred anthem)
Vi ser en stjärna i alla. I Stefan på bussen, i Hanna på hemtjänsten och inte minst i dig! Humorgruppen Infallets musikaliska tolkning visar hur fantastiskt
၎င်းသည် Hultsfred ကိုမြေပုံပေါ်တွင်တင်ခဲ့ပြီးဟယ်လ်ဖရက်ရှိအခြားမည်သည့်နေရာမှမဆို Hotell Hulingen တွင်ကဲ့သို့တေးသီချင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့
ဆွီဒင်နာမည်ကြီးတေးဂီတနှင့်ဆက်စပ်သောအရာဝတ္ထုတစ်သန်းခွဲကျော်။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ပိုစတာများ၊ ဗွီဒီယိုအသံသွင်းခြင်း၊ စာအုပ်များ၊ သိချင်စိတ်များနှင့် Kurt Olsson ၏မူရင်းဝတ်စုံကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဒိ